Tallaalka COVID-19 | Washington State Department of Health
Tallaalka COVID-19 waa bilaash waxaana heli kara dhammaan dadka 5 sano jirada ah iyo kuwa ka wayn iyada oo aan loo eegin xaaladda soogalootiga.
Guriga xanuun dartii maka soo bixi la'dahay mana u baahan tahay talaalka COVID-19? Fadlan eeg halkaan
Maayo 20, 2022 – Tallooyinka xoojinta talaalka ee la cusbooneysiiyay ee Center for Disease Control and Prevention (CDC, Xarunta Kahortaga iyo Xakameynta Cudurada) iyo Western States Scientific Safety Review Workgroup (Kooxda shaqada Dib u eegista Sayniska ee Goballada Waqooyi) waa sidaan soo socota:
Carruurta jirta 5-11 sano waa inay qaataan kuurada xoojinta ah shan bilood kadib markay dhamaystaan taxanayaashooda rasmiga ah ee talaalka Pfizer-BioNTech. Carruurta nidaamkooda difaacu liito waa inay qaataan kuurada xoojinta ah ugu yaraan saddex billood kadib taxaneyaashooda rasmiga ah.
Qof kasta oo jira 12 sano iyo ka wayn waa inuu qaataa kuurada xoojinta ah shan bilood kadib markuu dhameeyo taxanaha rasmiga ah ee talaalka Pfizer ama Moderna, ama labo bilood kadib markuu qaato talaalka halka kuuro ah ee Johnson & Johnson (J&J).
Qof kasta oo jira 50 sano iyo ka wayn waa inuu helaa kuurada labaad ee xoojinta ah afar billood kadib markuu qaatay kuurada koobaad ee xoojinta ah.
Shaqsiyaadka jira 12 sano iyo ka wayn ee nidaamkooda jirku liito heer dhexe ama heer aad u daran waa inay qaataan kuurada labaad ee xoojinta ah afar billood kadib markay qaataan kuuradooda koowaad ee xoojinta ah.
Dadka jira 18 sano iyo ka wayn ee qaatay talaalka rasmiga ah iyo kuurada xoojinta ah ee J&J afar bilood kahor ayaa qaadan kara kuurada labaad ee xoojinta ah ee talaalka COVID-19 ee mRNA.
Waxa aan dooneynaa in aan kusiino macluumaadka aad ubaahan tahay. Xog joogto ah ayaan idin ka siin doonaa si aad oga gaartaan go'aan faahfaahsan caafimaadkiina.
Fadlan eeg xaashida xaqiiqda Iska Tallaalida COVID-19
Nagu soo booqo Bogga Xaqiiqada Tallaalka si aad wax badan ubarato
Baar bogga Vaccinating Youth (Tallaalida Dhallinyarada) si aad u hesho macluumaadka ku saabsan tallaallada COVID-19 ee loogu talagalay carruurta
Maxaan ubaahanahay in aan ogaado si aan u helo tallaalka COVID-19
Badqabka iyo Waxtarka
Dugsiyada iyo Daryeellada Carruurta
Nolosha tallaalka kadib
Tallaal Xoojiyaasha iyo Kuurooyinka Dheeraadka
Maxaan ubaahanahay in aan ogaado si aan u helo tallaalka COVID-19?
Sideen ku qaataa tallaalka (Ingiriisi ah)?
Booqo Meeleeyaha Goobta Tallaalka si aad u hesho ama aad u qabsato balan.
Waxaad sidoo kale lambarkaada ZIP kudiri kartaa 438-829 (GET VAX) si aad u ogaato goobaha tallaalka kuu dhow.
Ma qabtaa su'aalo kusaabsan tallaalka COVID-19? Ma u baahan tahay caawimaada helitaanka ballan tallaal? Ka wac laynka khadka macluumaadka COVID-19 1-800-525-0127, kadibna riix #. Caawimaad luuqadeed ayaa la heli karaa.
Haddii aad qabsaneyso ballanta qaadashada tallaalkaadi labaad (Moderna/Spikevax ama Pfizer/Comirnaty), waa in aad qadataa isla tallaalkaadi koobaad.
Haddii adiga ama qof aad taqaano guri joog yahay, buuxi foomka oonleenka oo ammaan ah. Jawaabahaaga ayaa noo sahli doona inaan Idinku xirno kooxaha la heli karo ee Degmada iyo/ama State Mobile Vaccine Teams (Kooxaha Talaallka Wareega ee Gobalka).
Arrimaha kale ee la xiriira COVID-19 sida guriyeynta, ka caawinta korontada, caymiska caafimaadka, wac 211 ama booqo wa211.org
Macluumaad dheeraad ah, eeg Tallaalada COVID-19: Waxa ay tahay in la ogaado xaashida xaqiiqada.
Qasab miyaa inaan ahaado muwaadin Maraykan ah si aan u qaato talaalka (Ingiriisi ah)?
Maya, qasab ma ahan inaad ahaato muwaadin Mareykan ah si aad u qaadato tallaalka. Taasi waxay ka dhigan tahay inaadan u baahnayn lambarka sooshal sekuuritiga, ama dukumiintiyo kale oo sheegaya muwaadinnimadaada si aad u qaadato tallaalka. Qaar kamid ah bixiyeyaasha tallaalka ayaa laga yaabaa inay qofka weydiiyaan lambarka sooshal sekuuritiga, laakiin khasab kuguma ahan inaad siiso.
Canugaada ma ubaahnaa in uu aahaado muwaadin Mareykan ah si uu uqaato tallaalka. Bixiyayaasha daryeelka caafimaadka ma weydiin doonaan qofka xaaladiisa soogalooti. Xaaladaha Badankooda, waalidiinta iyo mas'uuliyiinta ayaa ubaahan doona in ay siiyaan oggolaansho si loo tallaalo dhalinyarada kayar da'da 18 sano.
Washington State Department of Health (Waaxda Caafimaadka Gobolka Washington) waxa ay ku talineysaa in dhammaan dadka 5 sano iyo kaweyn ay qaataan tallaalka.
Lacag miyaa la iigaga qaadi doonaa tallaalka?
Maya. Waa in aan wax lacag ah lagaaga qaadin marka aad qaadato tallaalka, ama aadan ka helin biil adeeg bixiyahaaga ama xarunta tallaalka. Tani waxay sidoo kale khuseysaa dadka qaba caymiska gaarka ah, Apple Health (Medicaid), qaba Medicare, ama aan caymis ku jirin.
Haddii aad hesho adeegyo kale intaad la joogtid adeeg bixiyahaaga si aad u qaadato tallaalka, waxaa laga yaabaa inaad hesho biil la xiriira booqashada xafiiska. Si aad arrintaan uga hortagto, waxaad marka horaba weydiin kartaa daryeel bixiyahaaga qiimaha lacagta.
Haddii aadan haysan caymiska caafimaadka, adeeg bixiyayaashu kuguma soo dalici karaan kharashaadka tallaalka waxaana laga yaabaa inay ku xadgudbaayaan shuruudaha barnaamijka tallaalka COVID-19. Fadlan iimayl u dir covid.vaccine@doh.wa.gov haddii kharash lagugu soo dalaco.
Haddii aad caymis caafimaad leedahay kharashna lagugu soo dalacay, la xiriir qorshaynta caymiskaada. Haddii taasi aysan xalinin arrinta, waxaad sidoo kale cabasho u gudbin (Ingiriisi ah) kartaa Xafiiska Wakiilka Caymiska.
Wac 800-562-6900 si aad u hesho adeegga turjumaanka taleefanka (oo lagu heli karo in ka badan 100 luuqadood oo bilaash ah)
Kawaran haddii aan lahayn caymiska caafimaadka?
Haddii aadan lahayn daboolid caymis, u sheeg bixiyahaaga. Waxaad wali ku heli doontaa tallaalka lacag la'aan.
Haddii aan lacag la iigusoo dallacayn tallaalka oowgiis, maxaa la iiweydiinayaa macluumaadkeyga caymiska caafimaadka (Imgiriisi ah)?
Marka aad qaadato tallaalka, bixiyaha tallaalkaada ayaa laga yaabaa in uu kuweydiiyo haddii aad leedahay kaarka caymiska. Tani ayaa ah si ay dib ugu helaan lacag loogu magdhabayo in ay kusiiyeen tallaalka (khidmadda maamulidda tallaalka) Bixiyahaaga adeegga ha ogaado haddii aadan lahayn caymis. Waxaad wali awoodi doontaa in aad ku hesho tallaalka qaab lacag la'aan.
Waa maxay khidmadda maamulidda tallaalka yaana bixiya (Imgiriisi ah)?
Khidmadda maamulidda tallaalka waa khidmadda uu bixiyaha caafimaadku qaato si uu kuusiiyo tallaalka. Tani wey ka duwan tahay qiimaha tallaalka laftigiisa.
Dowladda federaalka ayaa bixisa kharashka buuxa ee tallaalka. Haddii aad leedahay caymiska caafimaadka dawliga ah ama mid gaar ah, bixiyahaaga adeegga tallaalka ayaa kharash dul saarayo si dib loogu magdhabo khidmadda maamulidda tallaalka.
Waa in aan lagaa qaadin kharash jeebkaada ah ama waa inaadan warqad biil ah ka helin adeeg-bixiyahaaga khidmadda maamulidda tallaalka COVID-19. Tani waxay sidoo kale khuseysaa dadka qaba caymiska gaarka ah, Apple Health (Medicaid), qaba Medicare, ama aan caymis ku jirin.
Waa kuwee tallaalada COVID-19 ee hadda la helo?
Saddex tallaal ayaa la ansixiyay in degdeg loo isticmaalo ama waxaa si buuxda u fasaxay U.S. Food and Drug Administration (FDA, Maamulka Cuntada iyo Daawada Maraykanka). Tallaaladaan ayaa hadda laga bixiyaa gobolka Washington. Tallaalka Pfizer (Comirnaty) iyo Moderna (Spikevax) ayaa lagu taliyaa in ka badan tallaalka Johnson & Johnson iyada oo ay ugu wacantahay khatarta dhifka ah ee xaalad loo yaqaan xinjiroowga dhiiga ee qabothrombocytopenia syndrome, (TTS, cillada yaraanta dhiiga balatletiska) iyo Guillain-Barré syndrome (GBS, Cillada difaaca jirka uu waxyeeleeyo neerfaha).
Tallaalka Pfizer-BioNTech ee COVID-19 (Comirnaty):
Talaalku waa labo kuuro, kaasoo loo dhaxaysiinaayo 21 maalmood, oo lagu daray:
Garooja dheeraad ah (saddexaad) waxaa loogu talagalay dadka difaaca jirkoodu liito.
Kuurada xoojinta ee loogu talagalay dadka da'doodu tahay 5 sano iyo ka weyn, ugu yaraan 5 billood kadib qaadashada kuurada labaad
Laguuma arko inaad si buuxda uga dhawrsan tahay caabuqa illaa qiyaastii laba asbuuc aad gaarto kadib markaad kuurada labaad qaadato. Tallaalka ayaa si buuxda Loogu ansixiyey dadka 16 sano ama ka weyn iyadoo wadata magaca Comirnaty. Tallaalka waxaa loo fasaxay in loo isticmaalo xaaladda degdeg ah ee dhalinyarada da'doodu u dhaxayso 5 illaa 15 sano. Tijaabooyinka caafimaadka ma muujin wax dhacda ah oo aan la filanayn.
Talaalka Moderna ee COVID-19 (Spikevax):
Talaalku waa labo kuuro, kaasoo loo dhaxaysiinaayo 28 maalmood, oo lagu daray:
Garoojada tallaallka dheeraadka ah (saddexaad) waxaa loogu talagalay dadka difaaca jirkoodu liito.
Kuurada xoojinta ah ee loogu talagalay dadka da'doodu tahay 18 sano iyo ka weyn, ugu yaraan 5 billood kadib qaadashada kuurada labaad
Tallaalkaan waxaa si buuxda loogu oggolaaday shakhsiyaadka jira 18 sano iyo kuwa kasii wayn. Laguuma arko inaad si buuxda uga dhawrsan tahay caabuqa illaa qiyaastii laba asbuuc aad gaarto kadib markaad kuurada labaad qaadato. Tijaabooyinka caafimaadka ma muujin wax dhacda ah oo aan la filanayn.
Johnson & Johnson-Janssen Tallaalka COVID-19:
Tallaalkaan waxaa loo fasaxay in loo isticmaalo xaaladda degdeg ah ee shakhsiyaadka jira 18 sano iyo kuwa kasii wayn. Kani waa tallaal hal kuuro ah (hal cirbad). Laguuma arko inaad si buuxda uga dhawrsan tahay caabuqa illaa hal illaa laba asbuuc kadib marka aad talaalka qaadato maahee. Dadka da'doodu tahay 18 sano iyo wixii kasii weyn waa inay qaataan qiyaas xoojin ah laba billood ama ka badan kadib markii ay qaataan kuurooyinka koowaad. Tijaabooyinka caafimaadka ma muujin wax dhacda ah oo aan la filanayn. Tallaalada Pfizer iyo Moderna ayaa lagu talinaayaa badelka tallaalka Johnson & Johnson. Dadka waawayn ee qaatay tallaalkii koobaad iyo daawada xoojinta ee Johnson & Johnson’s Janssen COVID-19 ugu yaraan 4 bil kahor hadda waxay qaadan karaan daawada xoojinta ah ee labaad ayagoo isticmaalaya tallaalka hidda sidaha mRNA ee COVID-19.
Haddii aan ka daaho qaadashada kuuradeyda labaad, miyaan ubaahanahay inaan dib usoo bilaabo wareega tallaalka (Imgiriisi ah)?
Maya. Haddii aad ka daahdo qaadashada kuuradaada labaad ma ubaahanid inaad dib usoo bilawdo wareegi tallaalka.
Qaado kuurada labaad sida ugu dhakhsaha badan marka la dhaafo tirada maalmaha lagu taliyey laga soo bilaabo qaadashadi kuuradaadi koobaad (21 maalmood ee Comirnaty/Pfizer, 28 maalmood ee Spikevax/Moderna).
Waxaa muhiim ah inaad qaadato labada kuuro intay rabto hakugu qaadato qaadashada kuurada labaad.
Haddii aad tahay qof difaaca jirkiisu liito oo aadna uqalanto kuuro dheeraad ah, waa inaad sugtaa ugu yaraan 28 maalmood kadib qaadashadaada kuurada labaad.
Ma qaadan karaa tallaalka COVID-19 haddii aan leeyahay uur, ama aan qorsheynayo inaan uur qaado?
Haa, xogta ayaa muujinaysa in tallaallada COVID-19 ay yihiin kuwo badqab u leh haweenka uurka leh. Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada) (Webseed kaliya ah Ingiriis), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG, Kulliyadda Dhakhaatiirta Kutakhasusay Taranka iyo Dhalmada Haweenka ee Mareykanka) (Webseed kaliya ah Ingiriis), iyo Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM, Bulshada Daaweynta Hooyada-Uurka) (Kaliya ah Ingiriisi) ayaa ku talinaaya in talaalka COVID-19 la siiyo haweenka uurka leh, ilmaha nuujinaaya, ama qorshaynaaya inay uur yeeshaan. Daraasadaha qaarkood ayaa muujinaaya haddii aad tallaal qabto, canugaada xitaa wuxuu helayaa unugyada difaaca jirka oo ka dhan ah COVID-19 oo uu kuhelaayo uurka iyo nuujinta. Haweenka uurka leh ee aan la tallaalin oo uu kudhaco COVID-19 ayaa halis ugu jira khatarada dhibaatooyinka sida dhalmada hore ama dhicisnimada. Intaa waxaa dheer, dadka uu kudhaco COVID-19 marka ay uur leeyihiin waxay labo ilaa seddex jeer ayey ubadan tahay in ay ubaahdaan kaalmo nololeed oo horumarsan iyo tuubooyinka neefsashada.
Si aad u hesho ilo dheeraad ah oo kusaabsan qaadashada tallaalka caabuqa COVID-19 markii aad uur leedahay iyo naasnuujinta, Fadlan ka eeg xogtii ugu dambeysay webseedka Hal Tallaal, Labo Naf.
Ma qaadan karaa tallaalka COVID-19 marka aan qaato tallaalada kale ee caadi ahaan la qaato (Imgiriisi ah)?
Haa. Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Guddiga Latalinta ee Kudhaqanka Talaalka) ayaa badalay talooyinkooda marka ay taariikhdu ahayd May 12, 2021. Waxaad hadda qaadan kartaa tallaalka COVID-19 isla marka aad qaadato tallaalada kale.
Uma baahnid inaad jadwal usameyso canugaada tallaalada la iska rabo iskuulka (Kaliya ah Ingiriisi) ama tallaalada kale ee lagu taliyo ee goonida ka ah tallaalka COVID-19. Ballanta tallaalka COVID-19 waa fursad kale uu canugaada kuheleyo dhammaan tallaalada lagu taliyey.
Waa maxay kaarka diiwaanka tallaalka?
Waa inaad heshaa warqada kaarka tallaalka marka aad qaadato kuuradaada koobaad ee tallaalka COVID-19. Kaadhkaan ayaa kuusheegi doona nooca tallaalka aad qaadatay (Comirnaty/Pfizer-BioNTech, Spikevax/Moderna, ama Johnson & Johnson) iyo taariikhda aad qaadatay.
Haddii aad qaadatay tallaalka Comirnaty/Pfizer-BioNTech ama Spikevax/Moderna tallaal, bixiyahaaga waa in uu kuu qabtaa ballanta kuuradaada labaad marka aad joogto goobta aad ka qaadanayso kuuradaada koobaad. Hayso kaadhkaan si tallaal bixiyahaaga uu ubuuxiyo kadib qaadashadaada kuurada labaad.
Haddii aad qaadato kuuro dheeraad ah ama kuuro xoojin ah, waa inaad sidoo kale u qaadataa kaarka diiwaanka tallaalka ballantaada. Bixiyahaaga tallaalka ayaa diiwaangelin doona garoojada.
Halkaan waxaa ku yaal tallooyin waxtar leh oo ay tahay in maskaxda lagu hayo marka laga hadlayo maareynta kaadhkaaga tallaalka:
Hayso kaadhkaada tallaalka inta udhaxayso qaadashada kuurooyinkaada iyo kadiba.
Ka qaad sawirro xagga hore iyo xagga danbe ee kaadhkaaga si aad u haysato koobi dijitaal ah.
Tixgeli inaad iimayl ahaan ugu soo dirto iimaylkaaga, adigoo usamaynaya album, ama aad astaan ku darto sawirka si aad si fudud markale ugu hesho.
Kalabax koobi haddii aad rabto mid aad iska wadwadato.
Weli waxaad qaadan kartaa kuuradaada labaad ee tallaalka xitaa haddii aadan keenin kaadhkaaga tallaalka markaa timaado ballantaada. Weydii bixiyahaaga tallaalka si uu u eego nooca (magaca) tallaalka aad qaadatay kuuradaadi koobaad si loo xaqiijiyo inaad markale qaadato isla nooci. Haddii uu kaa lumo kaadhkaagi tallaalka, gal MyIR (My Immunization Registry (Diiwaanka Tallaalkayga)) (Kaliya ah Ingiriisi) si looga baaro diiwaankaaga tallaalka ee COVID-19, oo kadibna kaqaado iskiriinshot ama sawirka macluumaadka. Haddii aadan lahayn ciwaan, waxaad iska diiwaan gelin kartaa MyIR waqti walba.
Fadlan maanka kuhay in ka xaqiijinta diiwaanadaada MyIR laga yaabo inaysan dhakhso noqon, helitaankeedana hadda waxa uu ku xadidan yahay kaliya luuqadda Ingiriisiga. Caawimada taleefanka tooska ah ayaa la heli karaa in lagaaga caawiyo MyIRmobile ama su'aalaha diiwaanka tallaalka adigoo kawacaya Department of Health (DOH, Waaxda Caafimaadka) COVID-19 leenka khadka 833-VAX-HELP ama kula xiriiraya iimeel waiisrecords@doh.wa.gov.
Maxaan u qaadanayaa tallaalka COVID-19?
Gabi ahaanba waa ikhtiyaarkaaga inaad qaadato talaalka COVID-19 iyo in kale, laakiin waxaan u baahan nahay in dadka ugu badan ee macquulka ah ay talaalka qaataan si aan meesha oga saarno aafadaan. Way ku adkaan doontaa fayraska COVID-19 inuu faafo marka dad badan oo bulshada ay helaan difaac ka dhan ah – ayagoo qaatay talaalka ama uu dhawaan caabuqu haleelay. Hadba intay sareeyaan tirada dadka qaata talaalka, ayay yaraanaysaa dadka uu caabuqu ku dhaco.
Tallaalada COVID-19 waxa uu kuu ilaalin karaa qaabab badan:
Wuxuu si wayn u yareeyaa fursada ah inaad aad u xanuunsato marka uu COVID-19 kugu dhaco
Qaadashada tallaalka buuxa waxey yareeysaa in isbitaalka lagu dhigo waxayna hoos u dhigtaa halista ah inaad u dhimato COVID-19
Tallaalada waxay kordhiyaan tirada dadka bulshada kujira ee difaacooda ilaalsan yahay, taas oo adkeyneysa in xanuunku sii faafo
Khabiirada waxay sii wadaan barashada awooda tallaalka ee ah in ay ka celiso dadka in ay u gudbiyaan caabuqa dadka kale.
Markii si buuxda laguu tallaalo, wali waa macquul inuu kugu dhaco COVID-19, laakiin way ka halis yartahay inaadan is tallaalin
Dadka aan qaadan talaalka wali waxaa ku dhici kara fayraska waxayna ku faafin karaan dadka kale. Dadka qaar ma qaadan karaan talaalka sababo caafimaad awgood, arintaan ayaana ka dhigaysa kuwo si gaar ah ugu nugul COVID-19. Haddii aadan talaalka qaadan, waxaad sidoo kale khatar wayn ugu jirtaa in isbitaal lagu dhigo ama aad u dhimato nooca fayraska cusub ee COVID-19 (Webseed kaliya ah Ingiriis).Qaadashada tallaalka waxay kacaawineysaa inay ilaaliso adiga iyo qoyskaada, dariska, iyo bulshada.
Maxaan uqaadanayaa tallaalka COVID-19 haddii dadka badankooda kabadbaadaan cudurka?
Dhimashada ma ahan kaliya khatarta uu leeyahay COVID-19. Dad badan oo uu ku dhacay COVID-19 ayaa dareema xanuun yar keliya. Hasa yeeshee, fayraska ayaa ah midaan gabi ahaanba la qiyaasi karin, waxaana og nahay in qaar kamid ah noocyada fayraska cusub ee COVID-19 (Webseed kaliya ah Ingiriis) ay u badan tahay inay xanuun daran kugu ridaan. Dadka qaar ayaa aad ugu jiran kara ama u dhiman kara COVID-19, xataa da'yarta aan qabin xanuunnada caafimaad ee xun. Dadka kale, oo loo yaqaano "dadka uu COVID muddo dheer hayo" ayaa qaadi kara cilado socon kara bilo saamayna kara tayada noloshooda. Sidoo kale ma naqaano wali dhammaan ciladaha muddada fog ee ka imaan kara COVID-19 maadaama uu yahay fayras cusub. Qaadashada talaalka ayaa ah difaaceena ugu fiic an ee kahortaga fayraska. Haddii xitaa aad yartahay oo aadna caafimaad qabto, waa in aad heshaa tallaalka COVID-19.
Waa maxay nooca cusub ee COVID-19?
Fayrasyada ayaa noocyo badan yeesha (isbedela) marka ay ugudbayaam qof ilaa qofkale. 'Nooc' ayaa ah fayras xoog iskubadalay. Qaar kamid ah noocyada ayaa baaba'a waqti kadib qaarna wey sii socdaan inay kufaafaan bulshada dhexdeeda.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada) (Webseed kaliya ah Ingiriis) ayaa tilmaama noocyada fayraska ee khuseeya. Hadda, dhawr nooc ayaa khuseeya sababtoo ah waxay kufaafaan si dhakhsa ah oo aad ufudud, ayagoo sababaya caabuqyo badan oo COVID-19 ah.
Tallaalka COVID-19 ma kahortagaa noocyada kala duwan?
Qaadashada tallaalka waxay gacan kagaysataa hoos udhigidda faafida fayraska, waxayna yareysaa iskugudbinta noocyada kala duwan fayraska. Waxay sidoo kale kusiineysaa difaac xoog leh oo kadhan ah isbitaal dhigida iyo udhimashada dhammaan noocyada fayrasyada la yaqaan.
Qaar kamid ah dadka la tallaalay ayaa laga yaabaa wali inuu kudhaco nooca cusub ee fayraska, laakiin cilmi baadhista ayaa muujineysa inay umuuqdaan inay dareemaan astaamo fudud. Waxaa muhiim ah inaad qaadato dhammaan kuurooyinka lagu taliyey si aad uyeelato difaac adag oo kadhan ah noocyada cusub ee fayraska.
Tallaalku waa habka ugu fiican ee difaaco adiga, kuwaad jeceshahay, iyo bulshadaada. Caymiska sare ee tallaalka wuxuu yareyn doonaa faafitaanka fayraska wuxuuna gacan kagaysan doonaa noocyada cusub ee fayraska inay soo ifbaxaan.
Sideen ku ogaaneynaa in tallaaladu badqab yihiin?
Si loo xaqiijiyo in tallaalada caabuqa COVID-19 ay yihiin kuwo badqab leh, Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Xarunta Xakameynta iyo Kahortagga Cudurrada) waxay ballaarisay oo ay xoojisay awooda wadanka uu u leeyahay inuu la socdo badqabka tallaaka. Sidaa awgeed, khuburada kuxeeldheer badqabka tallaalka ayaa la socon kara oona ogaan kara arrimaha laga yaabo inaanan lagu ogaanin inti la sameynayey tijaabooyinka caafimaad ee tallaalka caabuqa COVID-19.
Waa maxay waxa ka socda tallaalka Johnson & Johnson?
Laga bilaabo Diseembar 2021, Washington State Department of Health, (DOH, Waaxda Caafimaadka Gobolka Washington) waxay kugula talineysaa inaad doorato inaad qaadato tallaalka mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech ama Moderna) badelka tallaalka hal cirbad ah ee Johnson & Johnson (J&J).
Cusboonaysiintan waxay daba socotaa hagitaanka ay soo saartay Centers for Disease Control and Prevention (Xarumaha loogu talagalay Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada) ka dib markii xog cusub la soo bandhigay oo ku saabsan laba xaaladood oo dhif ah kadib qaadashada tallaalka J&J.
Xaaladahaan waxay la xiriiraan oo kaliya tallaalka J&J COVID-19, ma ahan tallaalada Pfizer ama Moderna. Loogu talagalay dadka hadda raadsanaayo qaadashada tallaalka COVID-19, DOH waxay kula talineysaa tallaallada Moderna iyo Pfizer. Si kastaba ha noqotee, tallaalka J&J weli waa la heli karaa haddii aadan awoodin ama aadan dooneyn inaad qaadato tallaaladaan midkood. Fadlan la xiriir bixiye daryeel caafimaad si aad ugala hadasho wax ku saabsan xulashooyinkaaga.
Haddii aad qaadatay tallaalka J&J COVID-19 intii lagu guda jiray saddexdii toddobaad ee la soo dhaafay ama aad qorshaynayso inaad qaadato tallaalka J&J COVID-19, ogoow calaamadaha digniinta ee ka mid ah nooca xinjirowga dhiigga ee ay sababto TTS. Waxaa ka mid ah madax xanuun daran, calool xanuun, lug xanuun, iyo/ama neef-qabashada. Haddii aad dareento wax kamid ah astaamahaan, fadlan sida ugu dhaqsiyaha badan u raadso daryeel caafimaad.
Waa wax caadi ah inaad dareento xanuun fudud illaa mid dhexe, ayna ku jiraan qandho, madax xanuun, daal, iyo xanuunka kala goyska/muruqa, inta lagu jiro asbuuca koobaad kadib markaad hesho talaalka COVID-19. Ciladahaan ayaa caadiyan billoowda saddex maalmood gudahood kadib markaad hesho talaalka waxayna soconayaan keliya maalmo kooban.
Maxay ka dhigan tahay marka uu tallaalku haysto oggolaanshaha FDA?
Oggolaanshaha buuxa, FDA waxay dib-u-eegtaa xogta waqti muddo dheer ah marka loo eego ufasixidda adeegsiga xaaladda degdegga ah. Tallaal in lasiiyo oggolaansho buuxa, xogtu waa in ay muujisaa badqab heersare ah, waxtarka, iyo xakameynta tayada ee soosaarka tallaalka.
Oggolaanshaha isticmaalka degdegga ah (EUA) waxay u oggolaaneysaa FDA in ay sameyso daawo laheli karo inta lagu jiro xaaladda gurmadka degdegga ah kahor inta aan lasiin ruqsad buuxda. Ujeedada iyo EUA waa in la xaqiijiyaa in dadka qaadan karaan tallaalo nolosha badbaadiya kahor baaritaanka waqtiga-fog ee xogta. Hase yeeshee, EUA wali waxa ay ubaahan tahay inay dib-u-eegis xoog leh kusameyso xogta caafimaadka—waqti muddo gaaban ah. Wixi EUA ah oo ay bixisay FDA waxaa si dheeraad usii baara Scientific Safety Review Workgroup (Koox -hawleedka Dib -u -eegista Badbaadada Sayniska), oo qeyb ka ah Western States Pact (Heshiisyada Gobolada Galbeedka) (Kaliya ah Ingiriisi).
Waa maxay Western States Pact?
Oktoobar, 2020 Washington ayaa ku biirtay Oregon, Nevada, Colorado iyo California si ay usameeyaan Koox -hawleedka Dib -u -eegista Badbaadada Sayniska ee Gobolada Galbeedka (Western States Pact) si ay dib ugu eegaan badqabka iyo waxtarka tallaalada COVID-19 kadib markay oggolaatay FDA. Koox-hawleedkan ayaa bixiya dabool kale oo dib-u-eegis khibradeed ah ee ku aadan badqabka tallaalka.
Guddiga waxaa kujira khuburo ay magacaabeen dhammaan gobolada xubnaha ka ah, iyo saynisyahano qaran ahaan la aqoonsan yahay oo khibrad u leh xagga tallaalka iyo caafimaadka dadweynaha. Marka ay FDA u oggolaato tallaalka in loo adeegsado xaalad degdeg ah, guddigu waxay dib u eegaan dhammaan xogta guud ee la heli karo oo isla markaana leh dib-u-eegista federaalka, waxayna soo saaraan warbixin. Habkaan ayaa la raacaa seddexda tallaal ee hadda aan haysano oo laga heli karo gobolka Washington, oona kudhici doona dhammaan tallaalada COVID-19 kuwaas oo lasiiyey Emergency Use Authorization (EUA) mustaqbalka. Akhri natiijooyinka Western States Scientific Safety Review Workgroup:
Tallaalka COVID-19 ee Pfizer-BioNTech (PDF) (Ingiriisi ah)
Tallaalka COVID-19 ee Moderna (PDF) (Ingiriisi ah)
Tallaalka COVID-19 ee Johnson & Johnson-Janssen (PDF) (Ingiriisi ah)
Sidee ayuu tallaalka COVID-19 ugu shaqayn doonaa jirkayga?
Ka daawo muuqaalkaan sida tallaaladu ushaqeeyaan jirkaada (Webseed kaliya ah Ingiriis).
tallaalada mRNA (Tallaalada COVID-19 ee Pfizer iyo Moderna)
Labo kamid ah tallaalada hadda laheli karo waxaa layiraahdaa tallaalada farriinsidaha RNA (mRNA).
talaalka mRNA ayaa baraya unugyada jirkaaga inay sameeyaan unugyo aan dhibaato lahayn oo barootiinka korona fayras. Nidaamkaaga difaaca jirka ayaa arkaaya barootiinada aan horay uga mid ahayn, kadibna jirkaaga ayaa bilaabaaya inuu sameeyo difaacyada jirka. Difaacyadaan jirka ayaa xasuusta sida loola dagaalamo COVID-19 haddii caabuq kugu dhaco mustaqbalka. Marka lagu talaalo, waxaad dhisaysaa difaac ka dhan ah COVID-19 adoon qabin cudurka. Marka ay shaqadeeda qabsato, mRNA ayaa si dhakhsa ah u burbureysa jirkana waa uu iska nadiifiyaa maalmo yar gudahood.
Tallaalada unugyada fayraska (tallaalada COVID-19 ee Johnson & Johnson)
Mid kamid ah tallaalada COVID-19 waxaa la yiraahdaa tallaalka unugyada fayraska.
Talaallada unugyada fayraska waxaa laga sameeyaa nooc la daciifiyay oo fayras ah (fayras ka duwan kan keena COVID-19). Talaaladaan ayaa baraya unugyada jirkaaga inay sameeyaan unugyo aan dhibaato lahayn oo barootiinka korona fayras. Nidaamkaaga difaaca jirka ayaa arkaaya barootiinada aan horay uga mid ahayn, kadibna wuxuu bilaabaaya inuu sameeyo difaacyada jirka. Jirkaaga ayaa baranaaya sida lagaaga difaacaayo caabuqa mustaqbalka ee COVID-19, adoon xanuunsan.
Talaalka fayraska ee aan hayno ayaa hal kuuro leh. Waxay qaadanaysaa ku dhawaad labo asbuuc kadib kuuradaada labaad si aad u hesho difaac buuxa.
Mararka qaar tallaalka ayaa keeni kara qandho fudud ama astaamaha sida hargabka, laakiin maaha kuwo dhibaato leh.
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah, eeg khayraadkan: Sawirada tallaalada COVID-19 and Tallaalada COVID-19: Waxa ay tahay inaad ogaato.
Marka dad badan oo bulshada kamid ah uu jirkoodu iska difaaci karo korona fayraska, markaas fayrasku ma helaayo meel uu galo. Tani waxay ka dhigan tahay inaan joojin karno faafida caabuqa si dhakhso ah aana usii dhawaano cirib tirka aafadaan.
Sidee loo sameeyaa tallaalada COVID-19?
Kani waa muuqaal gaaban oo sharaxaya sida tallaalka COVID loo sameeyo. (Kaliya ah Ingiriisi)
Waa maxay tallaal mRNA ah?
Farriinsidaha RNA, ama tallaalka mRNA waa nooc cusub oo tallaal ah. tallaalada mRNA ayaa baraya unugyada jirkaaga sida loo sameeyo unugyo aan dhibaato lahayn oo barootiinka korona fayraska ah. Barotiinka fayraska ayaa ah waxa aad ku arkeyso korka karoonofayriska. Nidaamka difaaca jirkaaga ayaa arkaaya barootiinada aan horay uga mid ahayn halkaa kadibna jirkaaga wuxuu bilaabaaya inuu dhiso jwaab difaac oo uuna sameeyo difaacyada jirka. Tani waxay lamid tahay waxa dhacaya marki uu nagu dhaco "si dabiici ah" caabuqa COVID-19. Marka ay shaqadeeda qabsato, mRNA ayaa si dhakhsa ah u burbureysa jirkana waa uu iska nadiifiyaa maalmo yar gudahood.
In kasta oo aan horay usoo adeegsanay mRNA ee noocyada kale oo daryeelka caafimaadku iyo xannaanada xoolaha, sameynta tallaallada iyadoo la adeegsanayo habkaan ayaa aad ugu weyn xagga sayniska waxaana laga yaabaa inay la macno tahay tallaallada mustaqbalka in si fudud loo sameyn karo.
Waxaad ka akhrin doontaa waxbadan oo ku saabsan sida tallaalada mRNA ushaqeeyaan webseedka CDC. (Kaliya ah Ingiriisi)
Waa maxay tallaalka unugyada fayraska?
Tallaalka noocaan ah ayaa isticmaala nooc la daciifiyey oo fayras kale ah "dulinka" kaas oo siinaya unugyadaada tilmaamaha. Dulinka ayaa galaya unug wuxuuna u adeegsanayaa mashiinka in uu ku abuuro cad aan dhiblahayn oo ah barotiinka COVID-19. Unuga ayaa kusoo bandhigaya barotiinka oogadiisa, nidaamka difaaca jirkaagana wuxuu arakayaa inuu meeshaa katirsaneyn. Nidaamka difaaca jirkaaga ayaa bilaabi doona inuu sameeyo unugyada difaaca jirka waxayna kashaqeysiiyaan unugyada si ay ula dagaalamaan waxa ay umaleeyaan inay tahay caabuq. Jirkaaga ayaa baranaaya sida lagaaga difaacaayo caabuqa mustaqbalka ee COVID-19, adoon xanuunsan.
Maadooyinka ku jira tallaalada COVID-19 waa kuwo caadi u ah talaallada. Waxaa ku jira maadooyinka saxda ah ee mRNA ama adenovirus wax laga badelay oo ay la socdaan maadooyin kale sida dufan, cusbo, iyo sonkor oo difaacaaya maadada falgalka samaynaysa, kana caawinaaya inay jirka si fiican ugu shaqayso, difaacaayana talaalka inta la kaydinaayo iyo marka la dhoofinaayo.
Tallaalada Pfizer, Moderna, iyo Johnson and Johnson Maku jiraan unugyo dadeed ah (oo ay ku jiraan unugyada ilmaha uurka ku jira), fayraska COVID-19, leexada caanaha, ilaaliyaasha, ama maadooyinka kale ee noolaha ayna ku jiraan maadooyinka hilibka khaansiirka ama gelatin. Tallaalada laguma koriyo ukumaha dhexdooda mana kujiraan wax waxsoosaarka ukun ah
Eeg S&J; bogga webseedka ee Isbitaalka Carruurta ee Philadelphiaebpage (Ingiriisi ah) macluumaad dheeraad ah oo kusaabsan maadooyinka kujira. Waxaad sidoo kale arki kartaa liiska buuxa ee maadooyinka ku jira xaashiyaha xaqiiqada ee Pfizer, Moderna, iyo Johnson & Johnson.
Talaalka Johnson & Johnson ma waxaa ku jiro cad ilmo uur ku jira lagasoo qaaday.?
Talaalka Johnson & Johnson COVID-19 waxaa lagu abuuray isla tiknoolajiyad lamid ah kuwa tallaalada kale loo isticmaalo. Tallaalka kuma jiraan qaybo ka mid ah uurjiifka ama unugyada uurjiifka. Hal qayb oo kamid ah talaalka ayaa ka kooban koobiyada shaybaarka lagu sameeyay ee unugyada asal ahaan ka yimid qaybo lagasoo doortay ilmo la iskasoo riday oo dhacday 35 sano kahor. Markaas kadib, laymanka unugyada talaalladaan waxaa lagu hayaa shaybaarka mana jirto ilo dheeraad ah oo laga soo qaaday ilmo uur kujiro si loo sameeyo tallaaladan. Tan ayaa noqon karta xog ku cusub dadka qaar. Hase yeeshee, talaallada sida bus-buska, jadeecada, iyo cagaarshoowga A ayaa loo sameeyay isla qaabkaas.
Talaallada COVID-19 miyey sababaan ma dhalaysnimo?
Ma jirto caddayn saynis oo sheegaysa in talaalladu keenaan ma dhalaysnimo ama dhalmo days. Marka talaalladu galaan jirkaaga, wuxuu kala shaqeeyaa habka difaaca jirka si loo abuuro difaacyada la dagaalamaaya korona fayraska. Shaqadaan wax saamayn ah kuma lahan unugyadaada dhalmada.
Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (Webseed kaliya ah Ingiriisi), American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (Ingiriisi ah), iyo Society for Maternal-Fetal Medicine (SMFM) (Ingiriisi ah) ayaa ku talinaaya in talaalka COVID-19 la siiyo haweenka uurka leh, ilmaha nuujinaaya, ama qorshaynaaya inay uur yeeshaan. Dad badan oo qaatay talaalka ka dhanka ah COVID-19 ayaa talaalka kadib uur yeeshay ama dhalay ilmo caafimaad qaba.
Hadda majirto wax caddeyn muujineysa in wax tallaal ah, oo ay kujiraan tallaalada COVID-19, ay sababaan dhibaatooyinka madhaleysnimada ragga. Daraasad yar oo dhawaan lagu sameeyey 45 rag caafimaad qaba (Ingiriisi ah) kuwaas oo qaatay tallaalka COVID-19 ee mRNA (sida, Pfizer-BioNTech ama Moderna) ayaa laga eegay astaamaha shahwada, sida tiradda iyo dhaqdhaqaaqa, kahor iyo kadib tallaalka. Cilmi baarayaashu ma aysan helin isbadello wax ku ool ah ee kujira astaamahan tallaalka kadib.
Qandho xanuun ka imaaneyso ayaa lala xiriiriyey iyadoo leh hoos udhac muddo gaaban ah soosaaritaanka shahwada ragga caafimaadka qaba. Inkastoo qandhadu ay noqon karto waxyeelo kumeel gaar ah ee tallaalka COVID-19, majirto caddeyn hadda jirta in qandhada tallaalka COVID kadib ay saameyneyso soosaarka shahwada.
Ka eeg CDC Macluumaad ku saabsan tallaalada COVID-19 ee dadka raba inay awlaad yeeshaan (Webseed kaliya ah Ingiriis) wixii xog dheeraad ah. Waxaad sidoo kale eegi kartaa Bogga tallaalada COVID-19 ee CDC (Webseed kaliya ah Ingiriis) xaqiiqooyinka ku saabsan tallaalada.
Astaamo noocee ah ayaa caadi iska ah kadib qaadashada tallaalka?
Sida tallaalada kale ee caadiga ah, Waxyeelooyinka ugu badan ee tallaalka waxaa ka mid ah meesha la durey oo xanuunta, daal, madax xanuun, iyo murqo xanuun.
Astaamahaan ayaa calaamad u ah in tallaalku uu shaqeynayo. Tijaabooyinka Pfizer iyo Moderna, saameynta kadhalata tallaalka ayaa dhaca badanaa labo maalmood gudahood markaad qaadato talaalka kadib, waxayna siijiraan ku dawaad hal maalin. Saameynta kadhalata tallaalka ayaa u badan kadib kuurada labaad marka loo fiirsho kuurada koobaad. Tijaabooyinka caafimaadka Johnson & Johnson, saameynta kadhalata tallaalka ayaa sii jirta celcelis ahaan hal ilaa labo maalmood.
Dhammaan saddexda tallaal, dadka kaweyn 55 sano ayey aad uyartahay iney soo tabiyaan saameynta kadhalata tallaalka marka la barbar dhigo dadka yaryarka ah.
Waxaa laga yaabaa inaa ku aragto onlaynka ama baraha bulshada kutiri kuteenooyin kusaabsan saameynta waxyeelada kadhalata tallaalka. Xaqiiji marwalba oo aad aragto sheegasho ku saabsan waxyeelada kadhalata tallaalka inaad hubiso meesha lagasoo xigtay sheegashadaas.
Maxaa dhacaya haddii aan xanuunsado kadib qaadashada tallaalka COVID-19?
Sida tallaalada kale ee caadiga ah, tallaalka COVID-19 ayaa sidoo kale wato waxyeelo kadhalata, sida garab xanuun, qandho, madax xanuun, ama daal ka dib markaad qaadato tallaalka. Kuwaani waa calaamado muujinaaya in tallaalka uu shaqeynayo. Ka ogow wax dheeraad ah oo kusaabsan waxyeelada suurtagalka ah inay ka imaado kadib qaadashada tallaalka COVID-19.
Haddii aad xanuusato kadib qaadashada tallaalka, waa inaad kuwargelisaa dhacdada xun Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, Nidaamka Warbixinta Dhacdada Xun ee Tallaalka). (Webseed kaliya ah Ingiriis). "Dhacdo xun" waa wax kasta oo dhibaato caafimaad ah ama saameyn waxyeelo oo dhaca kadib tallaalka. Wixii xog dheeraad ah oo kusaabsan VAERS, ka eeg "Waa maxay VAERS?" hoos
Waa maxay VAERS?
VAERS waa nidaam digniin hore ah oo ay hogaamiyaan Xarumaha Xakamaynta iyo Kahortagga Cudurrada (CDC) iyo Maamulka Cuntada iyo Daawada (FDA). VAERS ayaa ka caawin karta ogaanshaha dhibaatooyinka laga yaabo inay la xiriirto tallaalka.
Qofkasta (bixiyaha daryeelka caafimaadka, bukaanka, xanaaneeyaha) ayaa udiri kara ka warbixi falcelinta xun ee VAERS. (Webseed kaliya ah Ingiriis)
Nidaamku waxa uu leeyahay xadidaad. Warbixinta VAERS kama dhigna in tallaalku uu sababay falcelinta ama natiijada. Waxay kaliya kadhigan tahay in tallaalku kahorreeyey.
VAERS ayaa loo aasaasay inay ka caawiso saynisyahanada inay oggaadaan isbadallada iyo sababaha ay tahay inay kubaaraan dhibaato suuragal ah. Ma aha liiska natiijooyin tallaal oo lasoo xaqiijiyey.
Markaad warbixin ugudbiso VAERS, waxaa ka caawineysaa CDC iyo FDA inay aqoonsadaan walaacyada caafimaadka suurtagalka ah oo ayna xaqiijiyaan in tallaaladu badqab yihiin. Haddii wax arrin ah soo baxdo, waxay kaqaadayaan tallaabo waxayna ogeysiinayaan bixiyayaasha daryeelka caafimaadka wax kusaabsan arrimo suuragal ah.
Ma qaadan karaa tallaalka COVID-19 haddii uu horay iigu dhacay COVID-19?
Haa, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Guddiga La-talinta Dhaqamada Talaalka) waxa uu kula talinayaa qof kasta oo horey u qabay COVID-19 inuu qaato tallaalka.
Xogta ayaa muujineysa inay tahay wax aan caadi aheyn in markale qofku qaado cudurka COVID-19 90 maalmood gudahood kadib markii cudurka uu kugu dhacay, sidaa darteed waxaad yeelan kartaa xoogaa difaac ah (oo loo yaqaanno difaaca jirka ee dabiiciga ah). Si kastaba ha noqotee, ma naqaano inta uu difaaca jirka ee dabiiciga ahi shaqeyn karo.
Dadka hadda qaba COVID-19 waa inay sugaan tallaalka illaa ay ka bogsoonayaan oo muddadooda karantiilkuna ka dhamaanayso.
Dadka dhawaan la joogay dadka qaba COVID-19 waa inay sugaan talaalka illaa muddadooda karantiilku ka dhamaanayso, haddii ay si ammaan leh uga fogaan karaan dadka kale. Haddii ay jirto khatar wayn oo ah inay dadka kale ku ridaan caabuqa, waa la talaali karaa inta lagu jiro muddada karantiilka si looga hortago faafida cudurka.
Fadlan naga tixraac bogga Takoorka iyo Karantiilka loogu talagalay caabuqa COVID-19 si aad ooga hesho tilmaamaha loogu talagalay takoorka iyo karantiilka.
Ma qaadan karaa tallaalka COVID-19 haddii aan dareemay falcelin xasaasiyad tallaalki hore?
Tallaalku waa in aan lasiin dadka leh taariikh layaqaan oo ah falcelin xasaasiyad oo halis ah, sida alarjiga, kulahaa kuuro hore ee mRNA ama tallaalka unugyada, ama nooc kamid ah maadooyinka kujira Pfizer-BioNTech/Comirnaty, Moderna/Spikevax, ama Johnson & Johnson–Janssen ee tallaalada COVID-19.
Dadka kuyeeshay falcelin daran oo xasaasiyad ah tallaalada kale ama daawooyinka la isku duro ayaa laga yaabaa inay wali qaataan tallaalka.Hase yeeshee, bixiyayaasha tallaalku waa inay sameeyaan qiimeynta halista oo ayna katala bixiyaan halisaha suuragalka ah. Hadii bukaanku go'aansado inuu qaato tallaalka, bixiyaha tallaalku waa inuu fiirshaa 30 daqiiqo si uu ula socdo arrimaha ku saabsan falcelin degdeg ah.
The Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP, Guddiga Latalinta ee Kudhaqanka Talaalka) waxay kutalinayaan in bixiyayaasha tallaalku ay fiirshaan dhammaan bukaanada kale ugu yaraan 15 daqiiqo kadib qaadashada tallaalka si loola socdo falcelinta xasaasiyadda. Ka eeg ACIP tixgelinnada caafimaad ee kumeelgaarka ah ee tallaallada mRNA (Ingiriisi) wixii xog dheeraad ah.
Ma qasab baa tallaalka COVID-19?
Waa dookhaaga inaad qaadato iyo inkale talaalka COVID-19, laakiin qaar kamid ah dadka loo shaqeeyo, kulliyadaha, iyo jaamacadaha ayaa ubaahan.
Macluumaadka ku saabsan shuruudaha tallaaka guddoomiyaha gobolka (Webseed kaliya ah Ingiriisi) ee loogu talagalay shaqaalaha iyo qandaraaslayaasha ee hay'adaha gobolka, daryeel bixiyayaasha caafimaadka, machadyada waxbarashada iyo goobaha daryeelka caruurta.
Washington ayaa hadda shuruud u ah tallaalka COVID-19:
Shaqaalaha daryeelka caafimaadka iyo shaqaalaha daryeelka muddada fog (Webseed kaliya ah Ingiriisi)
Wakaaladda golaha shaqaalaha ee gobolka (Webseed kaliya ah Ingiriisi)
Shaqaalaha jooga goobaha waxbarashada (Webseed kaliya ah Ingiriisi), oo ay kujiraan:
Shaqaalaha iyo qandaraaslayaasha ushaqeynaya iskuulada gaarka looleeyahay ee K-12, iskuulkada dagmooyinka K-12 ee dadweynaha, iskuulada la maalgeliyo, iyo adeegyada waxbarashada dagmooyinka (amarku ma khuseeyo heshiisyada dugsiyada waxbarashada jaaliyadaha gobolka ama ardayda,
Daryeelka Carruurta iyo bixiyayaasha waxbarashada hore kuwaas oo u adeegga caruurta kayimaado qoysaska guryo badan, iyo
Shaqaalaha waxbarashada sare.
Shaqaalahan ayaa looga baahan yahay in si buuxda looga tallaalo COVID-19 (ugu yaraan labo asbuuc kadib dhameynta wareegga tallaalka) marka ay taariikhdu tahay Oktoobar 18, 2021. Shuruudda waxaa kujira qandaraaslayaasha, isxilqaamayaasha, iyo jagooyinka kale ee ka shaqeeyo goobahan dhexdooda.
Haddii aad kamid tahay kooxahan ama qofkaa ushaqeyso ama iskuulku ubaahan yahay tallaalka COVID-19, lahadal waaxdaada uqaabilsan shaqaalaha, qofkaa ushaqeyso, ama iskuulka si aad u ogaato waxaad sameyn lahayd. Waaxda Caafimaadku kuma luglaha xeerarka qofka loo shaqeeyo, kulliyadda/jaamacadda.
Tallaalku wuxuu gacan kageysanayaa difaacidda adiga iyo dadka kugu hareereysan inuu kudhaco COVID-19, waxaana kugu boorinaynaa inaad la hadasho dhakhtarkaaga ama xarunta caafimaadka si aad u waydiiso faa'iidooyinkiisa.
Waa maxay tallaalka COVID-19 ee shardiga u ah shaqaalaha K-12?
Bishii Agoosto 18, 2021, Gudoomiye Inslee ayaa ku dhawaaqay wareegto fareysa shaqaalaha iskuulada dadweynaha iyo kuwa gaarka loo leeyahay ee K–12 ay khasab kutahay inay qaataan tallaalka buuxa ee COVID-19, ama ay soo qaataan kadhaafid diimeed ama caafimaad kahor Oktoobar 18, 2021.
Amarka ayaa khuseeya dhammaan shaqaalaha kusugan goobaha waxbarashada, (Webseed kaliya ah Ingiriisi) oo ay kujiraan:
Wixii macluumaad dheeraad ah, eeg Shuruudaha tallaalka COVID-19 ee shaqaalaha iskuulada K-12: su'aalaha inta badan la isweydiiyo (PDF) (Ingiriisi ah) (Xafiiska Maamulaha Guud ee Casharada Dugsiyada Dawlada).
Sideen kuheli karaa kadhaafid ah shuruuda tallaalka?
Haddii qofka kushaqaaleysiiyey ama kulliyada/jaamacadaada shardi utahay qaadashada tallaalka COVID-19, ama lagaaga baahan yahay inaad qaadato tallaalka marka loo eego guddoomiyaha gobolka ee Jay Inslee ee Wareegtada Agoosto 9 (Ingiriisi ah) ama Wareegtada Agoosto 18 (Ingiriisi ah), waa inaad la xidhiidhaa qofkaa ushaqeyso ama kulliyada/jaamacadda si aad u ogaato sidey uqaadaan caddeynta tallaalka, haddii ay leeyihiin siyaasad iskadhaafid ah, iyo waxaad ubaahnaan lahayd haddii ay tahay inaad iska dhaafto. Waaxda Caafimaadku kuma luglaha xeerarka qofka loo shaqeeyo, kulliyadda/jaamacadda.
Ma ubaahnid inaad ka hesho foomka kareebitaanka Department of Health (DOH, Waaxda Caafimaadka) oo ah tallaalka COVID-19. DOH malahan foomamka kareebitaanka ee loogu talagalay tallaalka COVID-19. Washington State Certificate of Exemption (COE, Shahaadada Kadhaafitaanka Gobolka Washington) waxaa kaliya loogu talagalay waalidiinta/mas'uuliyiinta rabo inay kadhaafaan canugooda tallaalka looga baahan yahay caruurta iskuulada K-12, iskuulka kahor ama xarumaha daryeelka caruurta. Waqtigan, Washington shuruud uma aha tallaalka COVID-19 ee caruurta inay tagaan iskuulka ama xarumaha daryeellka caruurta, marka kuma jiro Washington State Certificate of Exemption.
Ma qaadan karaan tallaalka dadka kayar da'doodu 18 sano?
Haa. Dhallinyarada da'doodu tahay 5 sano iyo kaweyn waxay qaadan karaan tallaalka Pfizer-BioNTech. Dhallinyarada jirta 17 sano ayaa ugu baahan kara oggolaansho waalidka ama mas'uulka (kaliya ah Ingiriisi) si ay uqaataan tallaalka, ilaa ay yihiin kuwo sharci ahaan xor ah. Booqo bogga mareegteena ee ku saabsan Vaccinating Youth (Tallaalida Dhallinta) haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeraad ah.
Ka hubi xarunta tallaalka caafimaadka shuruudahooda muujinta caddeynta taladii waalidka ama sharci ahaan xor yihiin.
Gobolku miyuu ubaahan yahay tallaalka COVID-19 ee soo galida iskuulka K-12?
Washington State Board of Health (Guddiga Caafimaadka Gobolka Washington), ma aha Department of Health (Waaxda Caafimaadka), ayaa awood u leh inay shuruudaha tallaalka u sameeyaan carruurta ku jira dugsiyada K-12 Revised Code of Washigton (RCW, Xeerka La Cusbooneysiiyey ee Washington) 28A.210.140. Ma jirto shuruud la xiriirta tallaalka COVID-19 ee loogu talagalay dugsiyada ama xarumaha xannaanada carruurta wakhti xaadirkaan.
Canugeyga ma qaadan karaa tallaalada kale marka uu qaadanayo tallaalka COVID-19?
Dadka ayaa hadda qaadan kara tallaalka COVID-19 14 maalmood gudahood qaadashada tallaalada kale, oo ay kujiraan isla maalintaaba.
Ma waxaa jiri doona wax dabacsanaan ah oo la xiriirta shuruudaha tallaalka iskuulka ee sanad dugsiyeedka 2021-2022 marka loo eego aafada COVID-19?
Guddiga Caafimaadka Gobolka ayaa go'aamiya haddii ay tahay in la sameeyo wax kabadalid la xiriirta shuruudaha tallaalka iskuulka. Haddeertaan, shuruudaha tallaalka iskuulka ayaa sidiisa ahaan doona. Caruurta waxaa looga baahan yahay inay buuxiyaan shuruudaha kahor inta aysan xaadirin maalinta koobaad ee iskuulka.
Maxay kadhigan tahay in si buuxdo tallaalka loo qaatay?
Qofka wuxuu si buuxda ooga tallaalan yahay caabuqa labo toddobaad kadib marka uu qaato dhammaan kuurooyinka taxanaha aasaasiga ah ee lagu taliyey ee tallaalkooda caabuqa COVID-19.
Qofka wuxuu la socdaa tallaalkiisa caabuqa COVID-19 ee udambeeyey haddii uu qaatay dhammaan kuurooyinka taxanaha aasaasiga ah ee lagu taliyey iyo hal xoojinta tallaalka ah marki loo qalmo.
Maxay tahay inaan sameeyo hadda maadaama aan si buuxda isu tallaalay?
Marka aad si buuxda isku tallaasho, waa inaad:
Qorsheysaa ama aad ku xirataa kalendarka xasuusin si aad u qaadato kuurada xoojinta tallaalka markii aad uqalanto: shan bilood kadib markaad qaadato kuuradaada labaad ee tallaalka caabuqa COVID-19 ee Pfizer ama Moderna, ama labo billood kadib markaad qaadato tallaalka caabuqa COVID-19 ee Johnson & Johnson (J&J). Tani waxay kaadhigeysaa “mid la socdo kuwi udambeeyey” ee tallaalada caabuqa COVID-19 oo waxayna ku siinayaan difaaca ugu wanaagsan ee suurtagalka ah. Si aad u hesho macluumaad dheeraad ah, fadlan booqo boggeena “Kuurooyinka Xoojiya Tallaalka”.
Kadhigo warqadda kaarka tallaalka sida warqad dhalasho ama dukumiinti kale oo rasmi ah! Sawir kaqaado kadibna ku kaydi guriga. Mustaqbalka, waxaa laga yaabaa inaad ubaahato inaad caddeyso iska tallaalidaada COVID-19.
Hayso caddeynta rasmiga ah ee tallaalka. Ka eeg tusaalooyinka Department of Health (Waaxda Caafimaadka) ee Bogga Xaqiijinta Cadeynta Tallaalka COVID-19.
Ku dejiso taleefankaaga casriga ah WA Verify (Ogeysiisyada Udhawaanshaha Caabuqa ee Washington).
Haddii aan si buuxda iskaga tallaalay COVID-19, miyaan wali ubaahanahay inaan sameeyo taxadar kale?
Xitaa haddii si buuxda laguu tallaalay, waa inaad wali:
“La socotaa kuwi udambeeyey” adigoo qaadanaya kuurada xoojinta tallaalka si aad uhesho difaaca ugu wanaagsan ee suurtagalka ah.
Ixtiraamtaa shuruucda goobta. Magaalooyinka, ismaamulada, mehradaha ganacsiyada, munaasabadaha iyo masraxyada ayaa laga yaabaa inay weli ubaahdaan maaskarooyinka ama caddeynta qaadashada tallaalka/baaritaan lagaa waayey caabuqa.
Iskabaar haddii aad isku aragto calaamadaha caabuqa COVID-19.
Ku dejisataa taleefankaaga casriga ah WA Notify si uu kuugu wargeliyo haddii laga yaabo inaad udhawaatay COVID-19 iyo inaad si aan lagu ogaaneynin ugu wargeliso dadka kale haddii lagaa helo cudurka. WA Notify gabi ahaanba waa mid qarsoodi ah, mana oga qofka aad tahay iyo meesha aad aadayso.
Ku xiro afxir si fiican kuula eg marka aad joogto goobaha dadweynaha ee gudaha ah ee dadka badan ay joogaan si aad u hesho difaaca ugu wanaagsan ee suurtagalka ah.
Aad raacdo talooyinka safarka ee Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Xarunta Xakameynta iyo Kahortagga Cudurrada) iyo waaxda caafimaadka.
Qaadaa tallaabooyinka taxadarka lagama maarmaanka ah kadib suurtagalnimada udhawaanshaha COVID-19:
Haddii aadan qaadan tallaalka xoojinta ah oo 5 billood ama kabadan aad kamaqan tahay tallaalada (Moderna/Pfizer) ama 2 billood kamaqan tahay tallaalada (Johnson & Johnson) inaad dhammesytirto taxanaha aasaasiga ah, iskarantiil 5 maalmood oo kadambeyso udhawaanshaha caabuqa oo ay raaceyso inaad si adag u isticmaasho afxirka 5 maalmood oo dheeraad ah.
Haddii aad qaadatay xoojinta tallaalka, ma ubaahnid inaad iskarantiisho kadib soogaarista caabuqa, laakiin waa inaad xirataa afxirka muddo 10 maalmood ah kadib soogaarista caabuqa.
Ma is booqan karaan dadka la tallaalay iyo kuwa aan la tallaalin oo ka kala yimid qoysas kala duwan?
Xaaladda ayey kuxiran tahay. Haddii mid ka mid ah qoysasku ay joogaan dad khatar sare ugu jira xanuun daran oo ah COVID-19, (webseed kaliya ah Ingiriisi) markaa waa inaad ku booqataa bannaanka ama gudaha ayadoo daaqaduhu furan yihiin, adoo maaskaro si fiican u xiran, iyo joogtaynta kala fogaanta jirka (ugu yaraan 6 fiit / 2 mitir).
Haddii uusan ku jirin dad khatar sare ugu jira labada qoysba, markaa booqashada dibedda ama goob gaar ah oo gudaha ah iyada oo aan la xidhin waji-xidhka waxay leedahay halis hoose oo ah fiditaanka COVID-19.
Kawaran haddii dadka qaar ee gurigayga kusugan si buuxda loo tallaalay qaarka kale aanan loo tallaalin?
Haddii kaliya qaar kamid ah dadka gurigaaga jooga si buuxda loo tallaalay, waa inaad sameysaa taxadarro sidi in gurigaaga cidna laga tallaalin. Tani waxay ka dhigan tahay waa inaad xirataa maaskaro oo aadna kafogaataa 6 fiit (2 mitir) markaa booqaneyso dadka kasocda guryaha kale oo qeyb ahaan ama aanbaba la tallaalin – oona kafogoow isku imaatinkaan haddii suurtagal tahay.
Waa booqan kartaa dadka kasocda qoys si buuxda loo tallaalay marba haddii uusan jirin qof qoyskaaga ah oo halis sare oo daran ugu jira xanuunka COVID-19.
Ma la kulmi karaa koox weyn haddii dhammaanteen la tallaalay?
Dadka sida buuxda uqaatay tallaalka, kuwaas oo sidoo kale la socdo tallaalka xoojinta ah ee ugu dambeeyey, ayaa si wanaagsan ooga dhawrsan caabuqa COVID-19. Isku imaatinka udhaxeeya dadka sida buuxda loo tallaalay ayaa badbaado ah.
Fadlan maanka kuhay in dadka qaarkood aysan kahelin isku imaatinka – xitaa goobaha khatarta hoose leh gudahooda. Kuwa kale ayaa laga yaabaa inaysan weli rabin hab-isasiinta iyo gacan isku salaamidda. Oo taasina waa caadi. Qofka kasta wuxuu la qabsanayaa waxa caadiga iska noqonayo ee cusub oo waxaana dhammaanteena dooneynaa inaan badbaadno oo aan ilaalino dadka aan jecelnahay.
Miyaan ubaahanahay inaan tuso cadeynta tallaalka?
Waxaa laga yaabaa in lagaaga baahdo inaad caddeyso iska tallaalidaada COVID-19 goobaha tallaalka qaarkood, mehradaha ganacsiga dhexdooda ama markaad joogto munaasabadaha qaarkood.
Marka kadhigo warqadda kaarka tallaalka sida warqad dhalasho ama dukumiinti rasmi ah! Sawir kaqaad kadibna ku kaydi guriga. Akhri waxbadan oo ku saabsan kaararka iyo diiwaanada tallaalka.
Kawaran haddii aanan la socon tallaaladeydi udambeeyey ee caabuqa COVID-19?
Haddii aadan weli la socon tallaaladaadi udambeeyey ee caabuqa COVID-19:
Soo hel tallaalka COVID-19 oo lacag la’aan ah oo kuugu dhow!
Tixgeli xirashada maaskaro si fiican kuula eg markaad joogto goobaha gudaha ah ee dadweynaha.
Iska baar COVID-19 haddii aad isku aragto astaamo.
Haddii lagu soogaarsiiyey caabuqa COVID-19, iskarantiil 5 maalmood oo ay raaceyso inaad si adag u isticmaasho afxirka 5 maalmood oo dheeraad ah. Xaqiiji inaad sidoo kale isbaarto maalinta 5aad kadib soogaarista caabuqa.
Haddii aad safarto, iskabaar caabuqa COVID-19 kahor iyo kadib safritaanka.
Wali miyaan u xanuunsan karaa COVID-19 kadib markaa is-tallaalo kadib?
Waa midaan dhici karin, laakiin waxaa jira fursad yar. Tallaaladu waa kuwo waxtar aad uleh, laakiin ma ahan 100%. Haddii aad isku aragto astaamaha COVID-19-oo kale, (webseed kaliya ah Ingiriisi) waa inaa ka fogaataa dadka kale oona la xiriirtaa daryeel bixiyahaaga caafimaadka. Waxaa laga yaabaa inay kutaliyaan baaritaanka COVID-19.
Wixii macluumaadka baaritaanka COVID-19, fadlan booqo Macluumaadka baaritaanka.
Miyaan faafin karaa COVID-19 kadib markaa is-tallaalo?
Caabuqa ayaa kudhaca qeyb yar oo kamid ah dadka sida buuxda uqaatay tallaalka oona qaatay tallaalkooda xoojinta ah. Hase yeeshee, dadka la socdo tallaalada caabuqa COVID-19 ee ugu dambeeyey oo uu ku dhaco caabuqa COVID-19 ayaa fayraska u gudbin kara dadka kale.
Maxay tahay inaan sameeyo haddii la isoo gaarsiiyey caabuqa COVID-19?
Haddii si buuxdo aad uqaadatay tallaalka oo aadna sidoo kale qaadatay xoojinta tallaalka (oo aad la socoto kuwi udambeeyey), ma ubaahnid inaad iskarantiisho, laakiin waa inaad xirataa maaskaro muddo dhan 10 maalmood ah oo kadambeyso soogaarista caabuqa oo aadna iskabaartaa COVID-19 maalinta 5aad kadib soogaarista caabuqa. Haddii ay kasoo wareegtay 6 billood ama kabadan qaadashada tallaalka (Moderna/Pfizer) ama ay kasoo wareegtay 2 bilood ama kabadan qaadashada tallaalka (Johnson & Johnson) tan iyo markaad dhammeystirtay taxanaha tallaalkaaga aasaasiga ah, oo aadna weli qaadan kuurada xoojinta tallaalka, waa inaad iskarantiishaa muddo 5 maalmood ah, oo ay raaceyso inaad si adag u isticmaasho afxirka 5 maalmood oo dheeraad ah. Qofkasta waa inuu isbaaraa maalinta 5 aad kadib marka uu soo gaaro caabuqa, iyaadoo aanan loo eegeynin in qofku tallaalan yahay iyo inkale.
Sidee ayaan ku maareyn karaa istareeska iyo walaaca la xiriira COVID-19?
Waxa aan fahansanahay in aafadu saameyn karo caafimaadkaaga maskaxda iyo jirkaba, Kaligaa ma tihid.. Dad badan oo kusugan Washington waxay latacaalayaan istareeska iyo walaaca la xiriira dhibaatada shaqo ama dhaqaale, xirnaanshaha iskuulka, takoorka bulshada, walaaca caafimaadka, murugada iyo khasaaraha, iyo wax badan oo kale. Tan waxaa ku jira walaaca kusoo kordhay kunoqoshada hawlaha dadweynaha.
Halkaan waxaa aad ka helaysaa dhawr kheyraad oo kaa caawin kara inaad maareyso istareeska iyo walaaca:
Ka wac khadka Dhageysiga Washington 833-681-0211 si aad uweydiisato taageero kusaabsan istareeska la xiriira xanuunka COVID
Haddii aad kujirto dhibaatooyin:
Leenka Nolosha ee Kahortagga Isdilka(webseed kaliya ah Ingiriisi): 800-273-8255 (Caawinta luuqadda ee 150 luqadood)
Bogga Guriga> Xiriirada Xiisadaha (crisisconnections.org): 866-427-4747
Lifaaqa Dhalinyarada (kaliya Ingiriisi): wac ama farriin udir 866-833-6546 (Caawimaada luuqadda ayaa la heli karaa)
Adeegso Jawi Kawarqab ah (webseed kaliya ah Ingiriisi) si aad u dhegeysato, wax u barato, u wadaagto oo isugu xirto fayoobaanta iyo caafimaadka maskaxda.
Soo booqo boggeena Caafimaadka Maskaxda (kaliya Ingiriisi) wixi khayraad dheeraad ah.
Waa maxay farqiga u dhexeeya kuurada dheeraadka ee COVID-19 iyo xoojiso?
Kuuro dheeraad ah (sidoo kale loo yaqaano kuurada seddexaad) waxaa loogu talagalay dadka difaaca jirkoodu liito. Mararka Qaar dadka difaaca jirkoodu liito ma sameeyaan difaac kufilan marka ugu horreysa ee sida buuxda loo tallaalo. Tani marki ay dhacdo, qaadashada kuuro kale oo tallaalka ah ayaa ka caawin karta in ay sameeyaan difaac dheeraad ah oo kadhan ah cudurka.
Xoojiso waxaa lagu qeexaa waa kuuro tallaal oo lasiiyo qofka oo horay usameystay difaac kufilan kadib qaadashada tallaalka, laakiin difaacaas uu yaraaday muddo kadib (tani waxaa loo yaqaanaa yaraansho difaac). Tani waa sababta aad uqaadato xoojiso teetano 10-ki sanaba mar, sababtoo ah difaaca wareega tallaalki teetanada ee caruurnimadaadi ahaa waa uu yaraanayaa muddo kadib.
Fadlan dib u eeg tilmaamaha Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Xarunta Xakameynta iyo Kahortagga Cudurrada) dadka difaaca jirkoodu liito ama booqo webseedka DOH.
Yaa qaadanayo kuurada dheeraadka ah ee tallaalka COVID-19?
Maxay tahay sababta kuurooyinka xoojinta ay muhiim u yihiin?
Kuurooyinka xoojinta ah ayaa ka caawinaaya inay sii wadaan ka-hortagga cudurrada daran ee dadka halista sare ugu jira COVID-19 daran. Kuurooyinka xoojinta ah ayaa markii hore lagula talinayey kaliya dadka halista sare ugu jira COVID-19 daran, laakiin talo soojeedintii waxaa la ballaariyey dhammaadkii sanadkii si loogu daro qof kasta oo jira 5 sano iyo kasii weyn si ay gacan uga geystaan kordhinta ka hortagga ka dhanka ah xannuunka COVID-19. Tani si gaar ah ayey muhiim ugu tahay sare ukaca noocyada faafa iyo kiisaska COVID-19 ee kusii kordhaya Mareykanka oo dhan.
Tallaalada COVID-19 ee la oggolaaday ama laga ansixiyey gudaha Mareykanka ayaa wali aad waxtar ugu leh yaraynta halista cudurka daran, isbitaal dhigida, iyo dhimashada ka timaadda COVID-19, xitaa yaraynta noocyada cudurka. Wali, tallaalada hadda la isticmaalo waxaa laga yaabaa inuu hoos udhaco kahortagidooda cudurka muddo kadib. Kuurooyinka xoojinta ah waxa ay kordhin doonaan kahortaga uu keenay tallaalka ka dhanka ah COVID-19 waxa ayna gacan ka geystaan difaaca jirku inuu sii jiro muddo dheer.
Khayraadka COVID-19 ee kooxaha gaarka ah
Waa maxay waxa ay tahay inay Waalidiinta/Masuulka ka ogaadaan ee ku saabsan Tallaalka Carruurta ee COVID-19 (PDF)
Laab gubashada kadib tallaalka COVID-19: Waxa ay tahay inay ogaadaan Waalidiinta iyo Dhalin yaradu (PDF)
Macluumaadka tallaalka ee Carruurta iyo dhalinyarada qaba Baahiyaha Daryeelka Caafimaadka Gaarka ah (PDF) (kaliya ah Ingiriisi)
Naas nuujinta iyo/ama shaqsiyaadka Uurka leh
Tallaallada COVID 19 iyo caafimaadka taranka Meelaha lagala hadlo bixiyeyaasha caafimaadka (PDF) (kaliya ah Ingiriisi)
Xaqiiqooyinka Tallaalka - Su'aalaha Inta Badan la isweydiiyo ee Caafimaadka Tarank a
Soo galootiga iyo qaxootiga
Hagaha Kawada hadalka ee dhisidda Kalsoonida Tallaalka COVID-19 ee Soogalootiga iyo Qaxootiga (PDF) (kaliya ah Ingiriisi)
Walaacyada guud iyo xaqiiqooyinka (PDF)
COVID-19 Ogoow Xuquuqdaada loogu talagalay Xubnaha Bulshooyinka Soogalootiga (Shabakada Midnimada Soogalootiga Washington
Ka qeyb qaadashada tallaalka COVID-19 (webseed kaliya ah Ingiriisi):: Waaxda Caafimaadka ee Gobolka Washington (kaliya ah Ingiriisi)
Gurijoog ah tallaalna ubaahan? (PDF)
Kheyraad gaar ah ee bulshada oo dheeraad ah ayaa laga heli karaa bogga Kaqeyb qaadashada iyo Sinnaanta Tallaalka (kaliya ah Ingiriisi)
Su'aalahayga loogama jawaabin halkaan. Sidee ayaan kuheli karaa wax dheeraad ah?
Su'aalaha guud waxaa loo diri karaa covid.vaccine@doh.wa.gov.